Imayini uKhukho kuthiwa yenzangakhona – Ubukhosi
Home/ Ezanamuhla/Imayini uKhukho kuthiwa yenzangakhona
Abasebenzi beZululand Anthracite Colliery ngosuku lokwethulwa kwengxenye entsha yemayini (Isithombe: nguBanele Bhengu/Ingabadi Media Images)
Ngesikhathi iNingizimu Afrika inenkulumompikiswano mayelana neqhaza elibanjwe izimayini ekuthuthukiseni umnotho wezwe nowendawo, esifundeni iZululand kukhona ukuvumelana ukuthi imayini iZululand Anthracite Colliery (ZAC) ineqhaza elimqoka nelibonakalayo. Lokhu kukhuluma kuqinisekiswe yiMeya yalesi sifunda, iNkosi uMzamo Buthelezi enkulumweni ayethule ngesikhathi kuvulwa ingxenye entsha yale mayini ngoNhlangulana.
IMeya ibalule ukuthi ukuvulwa kwale ngxenye entsha kuzoveza amathuba nokuyonezezela esibalweni sabantu abayi-1300 abasebenza kule mayini. “Ngizizwa ngihloniphekile ukuba ngizokhulumela uMasipala wesiFunda iZululand, ngihalalisele iZululand Anthracite Colliery. Engikuqaphelile ukuthi ukuvulwa kwale ngxenye entsha yemayini kuzokwenza omkhulu umehluko kubantu basoKhukho Reserve ngokuthi kudaleke amanye amathuba emisebenzi azobangaphezu kwalana asedalekile. Ngikhuluma nje le mayini kumanje inabantu abangaphezulu kwe-1 300 abayizakhamuzi. Ngaphezulu kwalokho kuphinde kube nabantu abayikhulu abayizakhamuzi abahlomulayo ngokubakhona kwale mayini,” kusho iMeya. Iphinde yatusa le mayini yasoKhukho ngokuhlale ‘ikubeke eqhulwini ukusiza abantu abakhele uKhukho’.
Imeya ibe isiveza ukubaluleka ekuthini zonke izinkampani ezihweba emphakathini wasemakhaya kufanele zihlomulise umphakathi ngakho belu ukuthuthukisa umnotho wendawo. “Uma indawo inemayini, kufanele imiphakathi eyakhele leyo ndawo ibonakale ihlomula ngotshalozimali olosuke lukhona endaweni yayo. Ukuhlomula kwemiphakathi akufanele kube yinto yesikhashana kodwa akube usizo oluyohlala ingunaphakade ukuze abantu bakwazi ukukhomba ukuthi kubasize ngani ukubakhona kwemayini endaweni yabo. Lapha sikhuluma ngokuguquka kwempilo yabantu ibengcono, ibonakale ithuthuka,” kuqhuba iMeya.
Okunye okuvele enkulumweni yeMeya kube wusizo olwedlulele olulethwe ngabakwaZAC ngezikhathi zesomiso nokwenze kwacacela noma ngubani ukuthi abaphathi abasha kababhekile kuphela inzuzo kepha banendaba nenhlalakahle yabantu abangabanikazi bendawo abahweba kuyo.
Imeya iveze ukuthi ngezikhathi sesomiso ebesisibi kakhulu endaweni imayini yasoKhukho yakhipha amalitha amanzi ayizigidi ezingama-42 ahlanzekile, ahanjiswa emphakathini owawuhlukunyezwe isomiso. Ithe lokhu kwasiza kakhulu ngoba imfuyo nomphakathi bakwazi ukuphila ngezikhathi ezinzima. Iphinde yatusa le mayini ngezinhleo ezihamba phambili ezinhlelweni zokusungulwa kwemiphilandawonye nezinhlelo zokulwa negciwane lengculazi ngokuthi abantu bakwazi ukuhlolelwa lesi sifo mahhala.
Ezinye zezinhlelo ezenziwa nguZAC wuhlelo lokuqeqeshwa kwabadala olubizwa nge-Adult Basic Education and Training Programme. Kanti lukhona nolokuqeqesha umphakathi ngokwamakhono ehlukene kanye nolwezolimo.
Bezidlana imilala emqhudelwaneni iMayoral Cup